David de Gea Iyo Paul Pogba Oo ka tagaya Man United hadii | Goolasha
You are at:Home»England Premier league»David de Gea Iyo Paul Pogba Oo ka tagaya Man United hadii
By Goolasha on	 April 7, 2019 England Premier league, FALANQEYNTA, HORYAALADA, Laliga, League 1, Wararka Maanta, Wararka suuqa
David de Gea iyo Paul Pogba ayaa lagu soo waramayaa inay go’aansadeen inay riixaan inay ka tagaan Manchester United hadii kooxdu aysan ku guuleysan inay u soo baxdo Champions League.
Waxaa jira warar soo jeedin ah oo sheegaya in labada ciyaaryahan ay ka tegi karaan Old Trafford xagaaga, iyadoo De Gea uu heysto kaliya hal sano oo uu ka harsan yahay qandaraaskiisa, waxaana Pogba uu sheegay inuu doonayo inuu tartan cusub ka galo mustaqbalka dhow.
Sida laga soo xigtay jariiradda The Times, labada ciyaaryahan ayaa udhow inay udhowaan inay ka soo dhaqaaqaan albaabka haddii United aysan ku faraxsaneyn ciyaaryahan ka ciyaara tartanka kubadda cagta Yurub xilli ciyaareedka soo socda.
De Gea iyo Pogba ayaa ka warqaba inaysan ka mid noqon doonin dalabyada ay u codsanayaan inay u dhaqaaqaan koox kale, waxaana ay u muuqataa in ciyaaryahan uusan dooneynin inuu ka ciyaaro Europa League.
Real Madrid ayaa xiiseyneysa labada ciyaaryahan, halka Paris Saint-Germain ay diyaar u tahay inay u soo bandhigto De Gea heshiis qadarin ah madaama ay doonayaan inay xoojiyaan udhaxaadka labada kooxood.
United ayaa la sheegayaa inay mudnaanta siineyso labada ciyaaryahan xilli ciyaareedkan suuqa kala iibsiga.